Wasaaradda Macaamiisha waxay kujirtaa 'sanduuqyada bililiqada' ee Sharciga Ciyaaraha | Androidsis
Ka dib Belgium, ugu dambeyntii 'sanduuqyada bililiqada' waxaa lagu dari doonaa Sharciga cusub ee Ciyaaraha ee Spain. Hadana waanu dhihi karnaa waxay micno weyn u yeelan doontaa freemium-kan aan ku ciyaareyno bakhtiyaanasiibka si aan u helno shay la doonayo ama horumar ah avatar-keena.
Oo waa taas Wasaaradda Isticmaalka Dowladda Isbaanishka ayaa ka tagtay amar in sanduuqyada bililiqada ama 'sanduuqyada bililiqada' loo qaadan doono inay yihiin ciyaaro nasiib. Tani waxay tusineysaa in iyaga la nidaamin doono oo deyrarka la saari doono qaab ganacsi oo aan xad lahayn noocuu doono ha ahaadee.
Sanduuqyadan bililiqada ah ama 'sanduuqyada bililiqada' waxay ku jiraan aqlabiyadda ciyaaraha freemium iyo xitaa kuwa kale oo badan sida 'Clash Royale' oo loogu ciyaaro "si aan kala sooc lahayn" mar kasta oo aan lacag bixinno si aan isugu dayno inaan maqaar ama dhar dheeraad ah u helno.
In tusaalahan la deyriyay waxay ka dhigan tahay inay u dhici karto sidii ka dhacday Biljim oo kale (xitaa Nintendo inay ka noqoto qaar ka mid ah ciyaaraheeda), halkaas oo ciyaaraha leh qaabka ganacsigaas sida Apex Legends, markaad iibsato lacagteeda, waxaad dooran kartaa maqaarka halkii aad ka dooran lahayd ciyaaro roulette si aad u aragto inay tahay markiiagii, taasoo u horseedi karta dabeecado balwadeed oo laga soo dheegtay khamaarka.
Khadadka ugu muhiimsan ee ay ku shaqeyneyso Wasaaradda Macaamiisha waa in lagu hormariyaa ka hortagga khamaarka ee carruurta yaryar. Tan awgeed, sharcigii hore ee 2011 dib ayaa loo eegi doonaa waxna looga beddeli doonaa si ujeedooyinkaas loo gaaro. Ma aha oo kaliya Beljamka midda nidaamisay sanduuqyada bililiqada, laakiin Faransiiska, Ustaraaliya iyo Boqortooyada Ingiriiska Waxay horumarinayaan xeerarka suuqa sanduuqa bililiqada.
Hadda waa inaan aragnaa tallaabooyinka la qaadayo si loo xakameeyo sanduuqyada bililiqada iyo in qaabka ganacsiga ee sida xorta ah ugu socda qaybahaas laga hortagi doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 'Sanduuqyada bililiqada' waxaa lagu dari doonaa Sharciga cusub ee Ciyaaraha ee Spain